Fitsidihana nataon’ny Ambasadaoron’i Inde teto amin’ny Antenimierandoholona. – Sénat de Madagascar
Fitsidihana nataon’ny Ambasadaoron’i Inde teto amin’ny Antenimierandoholona.
December 17, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Nitsidika tamin’ny fomba fifanajàna ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ny Ambasadaoron’i Inde monina sy mipetraka eto Madagasikara, A,driamatoa ABHAY KUMAR, ny Talata 17 desambra 2019 tetsy amin’ny Lapan’Anosikely.
Niompana tamin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny Antenimierandoholona Indianina sy ny Antenimierandoholona Malagasy ny fihaonana, mba hisian’ny fifanankalozana traikefa eo amin’ny firenena roa tonta. Nilaza moa Atoa ABHAY KUMAR fa ny Firenena Indianina dia vonona hatrany ny hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampandrosoana ny Firenena.
Raha nandray fitenenana kosa ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO dia nilaza fa ny tombotsoan’ny vahoaka Malagasy no laharam-pahamehana ka tokony amin’ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono no ampiana tosika mba hisian’ny tena fampandrosoana. Nambarany ihany koa fa ny Antenimierandoholona Malagasy dia sehatry ny fifandanjam-pahefana sy ny Demokrasia.
Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy eo amin’ny tany roa tonta ary dia nitondra ny fanirian’ireo Parlementera Indiana ity Ambasadaoro ity ny amin’ny hananganana “Groupe d’amitié” eo amin’ny Antenimierandoholona Indiana sy ny Antenimierandoholona Malagasy. Vonona hiroso amin’izany ny Antenimierandoholona Malagasy hoy ny Filoha Rivo RAKOTOVAO ary tsy hiandry ela amin’ny fikarakarana.
Nanasa ny mpikambana amin’ny Antenimierandoholona Malagasy ihany koa moa ity Diplômaty ity mba hitsidika ny Antenimierandoholona Indianina.
« VAOVAO “LE JITE” DREAM’IN TV: TSY SAKANA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY ANTENIMIERANDOHOLONA
“Mission de playdoyer” avy any Maputo: Nampahafantatra ireo Loholona ny tokony handaniana ny “ratification du protocole de Maputo”. »